लोकसेवाले थाल्यो बढुवा प्रक्रिया,नयाँ बिज्ञापन गर्न कसरी गर्दैछ तयारी ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
लोकसेवाले थाल्यो बढुवा प्रक्रिया,नयाँ बिज्ञापन गर्न कसरी गर्दैछ तयारी ?
बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा आठ सचिव पद रिक्त
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भने आइतबारदेखि सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ, अब छिट्टै योग्यताक्रममा रहेका सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुनेछन् । ’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सचिव बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहेन कानुनी प्रावधान छ ।
यसरी सचिव बढुवा हुनेमा सहसचिव दामोदर रेग्मी, गणेश पाण्डे, मधुसूदन बुर्लाकोटी, खगेन्द्र नेपाल, किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरेलगायत छन् । उनीहरू सबै जना आगामी दुई साताभित्रै सचिवमा बढुवा हुनेगरी बढुवा समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । दशैँ लगत्तै लोकसेवाले ठुलो संख्यामा बिज्ञापन गर्ने आन्तरिक तयारी समेत थालेको छ।
सचिवमा बढुवा गर्न तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस, को- को परे ?